भूकम्पीय डेटा राज्यको सम्पति हो : विदेशीको होइन | RevoScience Nepali
Home /भूकम्पीय डेटा राज्यको सम्पति हो : विदेशीको होइन
slide imagesJune 2, 2015
खानी विभागसँग भएको डेटा राज्यको सम्पति हो । यसलाई लुकाएर राख्न जरूरी पनि छैन । यो दिइरहेका छौं ।
जापानमा गएको ८ दशमलव ५ म्याग्निच्यूटको भूकम्प केहि समयमै किन ६ दशमलव ८ को भनियो, यदि उनीहरूको इकुपमेन्ट अतिआधुनिक थियो भने !
नेपालको खानी तथा भूगर्व विभागमा २० वर्षको अनुभव बटुलेका लोक विजय अधिकारी सोही विभागमा अवस्थित राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख हुनुहुन्छ । उहाँले त्रिभूवन विश्वविद्यालयबाट गणितशास्त्रमा स्नातकोत्तर, जापानको एक विश्वविद्यालयबाट सेस्मोलजीमा पोष्ट ग्रयाजुएट र त्रिविवि भूगर्वशास्त्र केन्द्रीय विभागबाट भूगर्वशास्त्रमा एमएस्सी गरेका छन् । बैशाख १२को ७ दशमल्लव ६ रिक्टरको भूकम्प गएपछि नेपालका १४ जिल्लामा असर गर्यो । सन्दर्भमा, नेपालमा भूकम्पको अनुसन्धान गर्ने संस्था रूपमा विकास भएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रको सेरोफेरोमा अधिकारीसँग रिभोसाइन्स मासिकका लागि लक्ष्मण डंगोलले गरेको कुराकानीको संम्पादित अंशः
नेपालमा सेस्मिक स्टेशनहरू कति वटा छन् ?
जमिनको विस्थापन मापन गर्न ग्लोबल पोजिसन सिस्टम (जिपिएस) स्टेशनहरू २९ वटा छन् । गति मापन गर्न, केन्द्रविन्दु र म्याग्निच्यूट पत्ता लगाउन काम गर्नको लागि नेपाल भरी २१ वटा सेस्मिक स्टेशनहरू छन् ।
विभागको जिपिएस स्टेशनहरू स्वचालित छैनन् र स्टेशनहरू पनि अनुसन्धान गर्नको नभई विदेशीको इच्छा अनुरूप राखेका भन्छन् नि !
नेपालको हिमालयको क्षेत्रहरूमा भूकम्प कसरी जान्छ भन्ने हिसावले विदेशका भूकम्पीय क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने संस्था र नेपाल सरकारको सहमतिमा नेपालमा अध्ययन गर्न सयुक्त रूपमा राखिएको हो । यसमा हाम्रो पनि इच्छा छ । उनीहरूको मात्र इच्छाले यो सब भएको होइन ।
खानी विभागले नेपाली रिसर्चरहरूलाई डेटा नदिएको भन्छन्, खासमा कुरा के हो ?
४ रिक्टर स्केलभन्दा माथिको डेटा हामीले तत्काल हाम्रा वेब पेजमा राखेका हुन्छौं । हामीसँग भएका डेटा विभिन्न सेमिनार, जियोलजिकल कंग्रेसजस्ता कार्यक्रममा पनि सार्वजनिक गरिन्छ । जस्तो विभिन्न व्यक्ति वा विदेशी संस्थाहरूले छुट्टै अनुसन्धान गर्न चाहेमा राज्यले डेटा दिन्छ कि दिदैन वा वाहिरबाट अनुसन्धान भएको डेटा राज्यलाई दिनु पर्छ कि पदैन भन्ने कुरा अलग हो । बाहिरका रिसर्चरले संकलन गरेको डेटा र खानी विभागसँग भएको डेटा मिलाएर राज्यको लागि काम गर्ने भन्ने हो । तर नेपालमा त्यस्तो हुन नसकेको अवस्था छ । खानी विभागसँग भएको डेटा राज्यको सम्पति हो । यसलाई लुकाएर राख्न जरूरी पनि छैन । यो दिइरहेका छौं ।
खानी विभागसँग भएको डेटालाई दातृ निकायको अनुमतिमा मात्र हामीले प्रयोग गर्न पाइने हो ?
कुरा त्योसो होइन । नेपाल सरकार र फ्रेन्ससँग सम्झौता गर्दा प्रस्ट रूपमै खानी विभागसँग भएको डेटा नेपाल सरकारको हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसकारण हामीले प्रयोग गर्न अन्यत्र सोध्न पर्दैन । यसमा हाम्रो पूर्ण स्वामित्व छ ।
नेपालमा भूकम्प गएको भोलीपल्टै युरोपियन स्पेश एजेन्सी, नासा जस्ता संस्थाले भूवनोट सरेको भन्ने किसिमको अनुमान गरे । तर तपाईहरूले धेरै पछि मात्र चाल पाउनुभयो, यस्तो किन भएको ?
हाम्रो जिपिएसको डेटा भूकम्पीय अध्ययनको लागि प्रयोग गछौं । ल्याण्ड सिफ्टको जुन कुरा नेपालको सर्भे विभागले हेर्ने हो । हामीसँग भएका जिपिएसको केहि डेटा अझै डाउनलोड गर्ने प्रक्रियामा छौं ।
खानी विभागले आफैले किनेको एउटा पनि इकुपमेन्ट छैन र भएका उपकरणको प्रयोग गरि अनुसन्धान पनि गर्न सकेन भनिन्छ, किन ?
यो निराधार कुरा हुन । यसमा सत्यता छैन । पत्र पत्रिकामा पनि आएका छन् यस्ता कुरा । तर नेपालमा भूकम्पको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान अरू कसले गरेको छ ? हामीले गरेको काम—त्यो प्रस्टै छ । जुन इकुपमेन्टको कुरा छ, ‘महँगा हुने र राज्यको प्राथमिकता यो पर्यो वा परेन’ त्यसमा भर पर्छ । हाम्रा नेपाली दाजुभाई दीदि बहिनीहरूले रिक्टर स्केल भन्नमा त समस्या देखियो, यसले हाम्रो अवस्था बताईदिएको छ । यसले राज्यको ध्यान कता छ भनेर देखाउँछ । अनि यसप्रति लगानी कहाँबाट हुन्छ । टेक्निकल रूपमा हामीसँग भएका इकुपमेन्ट नेपालका सम्पति हुन । यो कसैले त्यतिकै दिएको नभई सम्झौता मुताविक खानी विभागम भित्र्याएको हो । यो हाम्रै सम्पति हो । विदेशीसँग मिलेर काम गर्दैमा उनीहरुको हुने होइन । यसर्थ, कति लगानी सरकारले विज्ञान प्रविधिमा गर्नु पर्छ—त्यो सरकारको पाटो हो ।
भूकम्प मापनको विषयमा विवादस्प देखियो नि !
बैशाख १२ को गोरखाको बारपाक केन्द्र भएर आएको ७ दशमलव ६ रिक्टरको भूकम्प पछि ४ रिक्टर स्केलभन्दा माथिका २९४ भन्दा बढी भूकम्प गइसकेको छ । नुवाकोटमा केन्द्र भएर गएको ५ दशमल्लव २ रिक्टर स्केलकोे केन्द्रविन्दु विदेशीले अन्यत्र केन्द्र भएको सूचना दिएका थिए । त्यस्तो त हामीले गरेका छैनौं । हामीले त्यसरी जस्तो पाए त्यस्तो डेटा दिने होइन । डेटा हामीले मुखले त्यतिकै भन्ने पनि होइन । विज्ञानका आघारमा भन्ने हो । बीस वर्षदेखि भूकम्पको डेटा रेकर्ड गर्दै आइरहेका छौं । यो पुरानो प्रविधि भन्ने जस्ता आरोपहरू आएका छन् । त्यसो नभई ‘रिक्टर स्केल र म्याग्निच्यूट’ गरि दुई किसिममा मापन गरिन्छ । यस्ता ज्ञानको कमी आम–मानिसलाई भएको हो । ठूला भूकम्प गएको बेला नजिकका सेस्मोमिटरले चुस्त डेटा नदिएपनि त्योसँगै नजिक भएको स्टेशनले दिन्छ । यहाँ भित्रको प्रविधिको कुरा बाहिरका मानिसलाई थाहा हुदैन । प्रविधि सधै पुरानै हुन्छ भन्ने पनि छैन । यो समयअनुरूप अपग्रेड गरिएको हुन्छ । हामीले ६ दशमल्लव ८ रिक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा तत्कालै भन्न सकेनौं, केन्द्रविन्दु त तत्कालै भनेकै हो । किन भने नजिकका सेस्मिक स्टेशनहरू बढी सेचुरेसन (परीपूर्णता) भएकोले सही डेटा दिदैन । तर अन्यत्रको स्टेशनले भने दिने गर्दछ । त्यसमाथि पनि हामीसँग ‘लो र हाई सेन्सेटिभिटि (कम र उच्च सूक्ष्मग्राहिता)’ भएका उपकरणहरू छन्–भूकम्प मापन गर्नलाई । यस्ता कुरा बाहिरका मानिसलाई त थाहा हुँदैन । ‘हाई’ले काम नगरे ‘लो’ ले काम गर्छ । अर्को कुरा हामीले मापन गरेको स्केल अन्यत्रको भन्दा आफैमा फरक छ । एक स्केलबाट अर्को स्केलसँग मिलेको पनि छ । हामीले प्रयोग गर्ने सफ्ट्वेर, मोडल संसारभर एकै किसिमको हुन्छ भन्ने छैन । तर हाम्रा मिडियाहरूबाट विभिन्न किसिमको हल्ला फिजाउने काम भयो । त्यस्तै जापानमा गएको ८ दशमलव ५ म्याग्निच्यूटको भूकम्प केहि समयमै किन ६ दशमलव ८ को भनियो, यदि उनीहरूको इकुपमेन्ट अतिआधुनिक थियो भने !
अहिलेको भूकम्पलाई महाभूकम्प भन्ने कि नभन्ने ?
भूकम्पको म्याग्निच्यूटको आधारमा ८ भन्दा बढीलाई महाभूकम्प भन्ने हो । ७ देखि ८ सम्मकोलाई मेजर (ठूलो) भूकम्प, ६ देखि ७ सम्मको लागि स्ट्रङ (शत्तिशाली) यसकारण महाभूकम्पमा परेन । यसकारण महाभूकम्प होइन ।
भूकम्पी अध्ययनको लागि पर्याप्त इकुपमेन्ट आवश्यक भएको तपाइहरूले सरकारलाई जानकार नगराइएको वा सरकारले यसमा ध्यान नदिएको हो ?
पहिलो कुरा यससम्वन्धी शिक्षाको कमि, अर्को कुरा हामीले सरकारलाई वुझाउन नै सकिएन । त्यतिहुदा पनि राज्यवाट धेरै काम भएको छ । भूकम्प मापन किन गर्नु प¥यो भन्ने देशमा आज भूकम्प मापन केन्द्र छ नि त ।
भूकम्प नजादासम्म नेपालका सञ्चारकर्मी कहाँ थिए ! हामीसँग भूकम्प मापन केन्द्र भएकै कारण इज्जत जोगाएर बसेका छौं । आफूसँग भएका प्रविधिका आधारमा बोल्न सेकेका छौं । डेटाको महत्व भएको जस्तो यसलाई महत्वका साथ सरकारे हेर्नु पर्दछ ।
केन्द्रलाई अनुसन्धान गर्न विकास गरेको हो ?
हामीले यस संस्थालाई डेटा संकलन, रिसर्च ल्याव र रिसर्चको रूपमा विकास गर्दै काम गरिराखेका छौं ।
भनेपछि केन्द्रसँग पूर्ण सुविधा भएको रिसर्च ल्याव छ ?
पूर्ण रूपमा नभएपनि भूकप्पीय अध्ययन÷अनुसन्धानकालागि चाहिने आधारभूत कुराहरू छन् ।
डेटा एनालिसिस गर्ने प्रविधि छ कि छैन ?
हामीले डेटा एनालिसिस नगरे कसले गर्ने ! भूकम्पको म्याग्निच्यूट विना एनालिसिस भनेको हो र ? हामीले निकालेको म्याग्निच्यूट कुन चाँहि विदेशी सँस्थाले मिलेन भनेको छ ! हामीले भनेका म्याग्निच्यूट कसैले गलत भन्न सेकेको छैन । वाहिर हल्ला फिेजेको जस्तो अवस्था होइन । यहाँ अपबाह फिजाउने काम भएको छ ।